Fikarohana momba ny firaisana Sarimihetsika Reincarnation Chanel & Raharaha Fiainana Mandrakizay an'i Anton Grot | Pharrell Williams - Fikarohana Reincarnation
Ny orinasa Chanel dia namoaka horonantsary fohy mitondra ny lohateny Reincarnation Ao anatin'izao fiainan'olo-tsotra izao dia manana endri-javatra mitovy amin'ny endriky ny mpiara-belona aminy. Ny fitoviana amin'ny endriky ny endriny dia tena tohanan'ny tranga tsy miankina amin'ny firazanana tsy miankina, anisan'izany ireo navoakan'i Ian Stevenson, MD ao amin'ny University of Virginia.
Efa niara-niasa tamin'ny trance medium Kevin Ryerson aho hatramin'ny 2001. Kevin dia manolotra torolàlana fanahy antsoina hoe Ahtun Re izay naneho ny fahaizan'ny fanaovana ny lalao tamin'ny fiainany tamin'ny fotoana ambony.
Nandritra ny fotoam-pivoriana niarahana tamin'i Kevin, nanontaniako ny fiainana taloha an'izay naseho tamin'ny sarimihetsika Chanel. Rehefa nanontany aho momba ny talentan'ireo talenta maro Pharrell Williams, Ahtun Re nilaza tamiko i Pharrell, taloha iray lasa izay, dia talen'ny zavakanto an-tsokosoko mozika nataon'i Busby Berkeley, toy ny Gold Diggers an'ny 1933.
Izaho tenany tsy mbola nahare momba an'i Busby Berkeley, saingy tamin'ny fanadihadiana kely dia hitako fa ilay talen'ny kanto ho an'ny azy Mpanamboatra volamena sarimihetsika Anton Grot, izay nanjary nahomby tokoa tao Hollywood. Tamin'ny andiany manaraka Kevin, Ahtun Re dia nanamafy fa i Pharrell dia i Anton Grot efa ela niainana.
Ny mahaliana dia nitombo tao amin'ny faritanin'i Virginia Beach, Virginia, izay fonenan'i Fikambanan'i Edgar Cayce ho an'ny fikarohana sy ny fahazavana. Cayce dia iray amin'ireo fantsona fanta-daza indrindra any Amerika, izay ny fampianarany dia nisy koa ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao. Araka izany, azo inoana fa i Pharrell dia niharan'ny fampianaran'ny reincarnation. Nanambara i Pharrell fa mino an'Andriamanitra izy ary Universalista izy. Ny porofon'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray dia mampiroborobo ny fomba fijery universalista.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy ny mitovitovy amin'ny Anton Grot sy i Pharrell Williams.
Ny fiainana taloha talenta: Anton Grot dia talen'ny zava-kanto ho an'ny sasany amin'ireo mozika malaza any Hollywood, raha Pharrell Williams dia mpitendry zavamaneno mahay sy mpamorona.
Fiovan'ny hazakazaka sy firenena: Teraka tany Polonina i Anton Grot ary Caucasian, raha i Farrell Williams dia teraka tany Etazonia ary Afrikana-Amerikanina izy.